Hot nkxu Wire kwalenza, okwabizwa ngokuba eshushu-dip wire yentsimbi zinc ngumfanekiswana, okanye ucingo intsimbi kwalenza. Hot nkxu Isefu Wire Material: eliphantsi carbon processing sentsimbi ngokuzoba, hot-dip zinc ngeso lenyama. Hot nkxu Iimpawu Wire kwalenza: 1. bhetyebhetye Excellent and ukuthamba 2. Ukusebenzisa efanelekileyo: ukwenza Net, athe ngokubhijela, kwamabhali, ejinga njalo njalo. Hot nkxu Isefu Wire Iqhubekekisa: Gal kuvelisa esemgangathweni eshushu-dip iqaqanjiswa ucingo intsimbi akhetha wire eliphantsi carbon sentsimbi, ngokusebenzisa inkqubo ...
FOB Price: US $ 450 - 1.050 / Ton
Min.Order Ubungakanani: 10 Metric Ton / Iitoni Metric
Supply Amandla: 65 Ton / Iitoni Usuku nganye
Hot nkxu Wire kwalenza , okwabizwa ngokuba eshushu-dip wire yentsimbi zinc ngumfanekiswana, okanye ucingo intsimbi kwalenza.
Hot nkxu Isefu Wire Material: eliphantsi carbon processing sentsimbi ngokuzoba, hot-dip zinc ngeso lenyama.
Hot nkxu Iimpawu Wire kwalenza:
1. bhetyebhetye Excellent and ukuthamba
2. Ukusebenzisa efanelekileyo: ukwenza Net, athe ngokubhijela, kwamabhali, ejinga njalo njalo.
Hot nkxu Isefu Wire Iqhubekekisa:
Gal kuvelisa esemgangathweni eshushu-dip iqaqanjiswa ucingo intsimbi akhetha wire eliphantsi carbon sentsimbi, ngokusebenzisa inkqubo wire umzobo, ukuhlamba acid kunye irusi nokususa, annealing kunye coiling.
Hot nkxu Isefu Wire Ezezicelo:
Hot-dip kwalenza wire guquka kakhulu kwaye ethambileyo, ngokubanzi asetyenziswe ekwakheni, yezandla, ephothiweyo locingo, express indlela ukubiya enemingxuma, kwiipakethe zemveliso kunye neminye imisebenzi yemihla ngemihla.
Hot nkxu Isefu Wire Ukucaciswa:
23 # ukuya 34 # kwakhona ekhoyo wire zentsimbi kwalenza.
Previous: PVC Wire Camera
Okulandelayo: Electro Wire kwalenza